ရန်ကုန်-ဒလကြိုးတံတား၊လှိုင်မြစ်ကူးတံတား၊၀ါးတစ်ရာတံတားတို့ကိုတည်ဆောက်သွားမည်ဟုဆို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ရန်ကုန်-ဒလကြိုးတံတား၊လှိုင်မြစ်ကူးတံတား၊၀ါးတစ်ရာတံတားတို့ကိုတည်ဆောက်သွားမည်ဟုဆို
Posted by ကို သာ on Aug 31, 2012 in Myanma News |6comments
ရန်ကုန်မြစ်ကိုဖြတ်၍ ရန်ကုန်- ဒလ ကြိုးတံတားကို တည်ဆောက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း တွင် ကျင်းပခဲ့သော လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှ သိရှိ ရသည်။
လေးလအတွင်းအပြီးဆောက်မည်၊တစ်နှစ်အတွင်းတော့ပြီးပါမည် စသည်ဖြင့်မကြာခဏပြောကြားပြီး ယနေ.တိုင် မြေပြင်အထက်သို.တက်လာသေးခြင်းမရှိသေး
သည့်ဆောက်လက်စ မြို.တွင်းတံတာမျး၏အခြေအနေကြောင့် ယခုစီမံကိန်းတံတားများမှာ အချိန်ပြောရန် စောသေးသည်ဟုယူဆရပါသည်။
ပြည်သူများအကြားတွင် ခန်.မှန်းကာလကို နတ်သက်နှင့်ပြောသည်ဟုဟာသနှောသံများကြားနေရပါသည်။
ဆောက်ပေမှပဲ… အဲဒီဇက်ကို ကူးဖို့က တော်တော်အချိန်ပေးရတယ်… ကားစီးရမှာက ၂ နာရီလောက်ပဲ… အ်ိမ်ကနေ ကြိုထွက်၊ ဇက်ကိုစောင့်၊ ဟိုဘက်ကမ်းကိုကူး၊ ကားမထွက်သေးလို့ ပြန်စောင့် နဲ့က အနည်းဆုံး နောက် ၂ နာရီလောက် ထပ်စောပြီး ထွက်ရတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ ပန်းဆိုးတန်း – ဒလ ဇက်သင်္ဘောက ၀င်ငွေကို သန်းနဲ့ချီပြီး ရှာပေးနေတာ…
ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်းက ပြောပါတယ် …. ဆောက်တုံး တဲ့ …. အဟီး …
လာမည် ကြာမည် မျှော် ရ လ တ္တံ
မျှော်တော်ဇောနဲ့ မောရှာကြသည့်သူများ များ လ တ္တံ ။
ပြောကြပြန်ပြီ.. ဆောက်ဖြစ်မှ ကျောင်းဒကာပါ။ ဒီသတင်းသာ ပြန့်သွားရင် ဟိုဖက်ကမ်းက အိမ်ဈေးမြေဈေးတွေ ဘုမသိဘမသိ တက်လာတာကိုတော့ ကြားရအုံးတော့မှာပ။